Casio AQS810W-1AV Wrist Watch - Trivoshop na $ 55.99
Home Chevron ala akara ngosi ọla Chevron ala akara ngosi Casio AQS810W-1AV Wrist Watch - Trivoshop
nnweta: ntụgharị efu: en.general.icons.icon_check_circle akara ngosi 30 dị na ngwaahịa, dị njikere ka ebupu ya
N'iji usoro sistemụ nke onwe onye pụrụ iche, ụdị egwuregwu analog / dijitalụ a na-enye ọtụtụ ọrụ. Ọtụtụ atụmatụ dị ka oge 48-ụwa oge, 5 mkpu, elekere nkwụsị na oge ngụda abụọ na-eme nke a oge ọhụụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu ọ bụla. Black resin gbalaga, anyanwụ dijitalụ analọg digital na nwa & ọcha ihu.
Hụ oge abụọ; na usoro analog na dijitalụ
Quartz zuru ezu iji gosipụta oge n'ụzọ ziri ezi
resin eriri - Na-enye nkwụsi ike na nkasi obi dị ukwuu
Mmiri na-eguzogide mmiri ruo 328.08 ft si otú a dabara maka mmiri mmiri n'okpuru mmiri
Mmiri na-eguzogide ọgwụ na-adịgide adịgide
M ca nt agwa ole m bang a ngwaahịa a